Darpan Nepal – रबि लामिछानेमाथि अध्यागमन विभागद्वारा छानबिन : नियम विपरीत गतिविधि नगरेको प्रतिवेदन पेश !
रबि लामिछानेमाथि अध्यागमन विभागद्वारा छानबिन : नियम विपरीत गतिविधि नगरेको प्रतिवेदन पेश !
नेपालमा पत्रकारिता गर्दागर्दै रबि लामिछाने अमेरिका हानिए । अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि फेरि पत्रकारितामा नै फर्किए । त्यतिबेलासम्म उनलाई थोरैले मात्र चिन्थे ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग एउटा प्रस्ताव लिएर गए । लाइभ टेलिभिजन सोमा सिधा जनताका प्रश्नका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम चलाउने ।
लामिछानेको प्रस्तावमा ओली राजी भए । नेपाल टेलिभिजनमा सुरु भयो कार्यक्रम– सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग । कार्यक्रम लोकिप्रिय भयो ।
त्यसपछि न्यूज २४ टेलिभिजनमा उनले जनतासँग सिधा कुरा जनतासँग सुरु गरे । जनताका कुरा सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउन थाले । मिठो स्वरमा निकै आक्रामक शैलीमा कार्यक्रम चलाउने उनको शैली निकै हिट भयो ।
उनकै कार्यक्रमकै कारण कतिपय हिरासतमा पुगे, कतिपयको जागिर गयो । धेरै पीडितहरुले न्याय पाए । जनताको नजरमा अहिले देशका सबैभन्दा लोकप्रिय पत्रकार बन्न पुगेका छन् । लोकप्रियता बढेसँगै समस्या पनि बढ्न थाल्यो ।
कानुनतः उनी अमेरिकी नागरिक हुन् । अमेरिकाको पिआर लिइसकेका छन् । कुनै पनि बिदेशी नागरिकले नेपालमा बसेर काम गर्न अनुमती लिनुपर्छ ।
त्यो कुरा लामिछानेलाई पनि थाहा थियो । त्यसकारण उनले अध्यागमन विभागबाट वर्किङ भिसा लिए । तर, वर्किङ भिसाको मापदण्डमा यस्तो कार्यक्रम चलाउन मिल्ने प्रावधान छै्रन । जसकारण केही व्यक्तिहरुले उनीविरुद्ध उजुरी गरेका छन् । दृष्टिन्युजमा खबर छ ।
हेलो सरकारमा गरेको उजुरीका आधारमा गृह मन्त्रालयले उनीमाथि छानबिन गर्न अध्यागमन विभागलाई २ महिनाअघि पत्राचार गरेको थियो । सोही अनुसार विभागले उनीमाथि छानबिन गरेको छ । स्रोतका अनुसार विभागका अधिकारीले उनलाई बोलाएर सोधपुछ गरेका थिए ।
लोकप्रिय व्यक्ति भएकाले उनले वर्किङ भिसााको नियमविपरीत गतिविधि नगरेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश भएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका केही व्यक्तिहरुले उनलाई फसाउन समेत खोजेका थिए । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि लामिछाने ढुक्क छन् । इताजाखबर
Previous Postसपनाको महलमा चन्द्र र पुजाको प्रेम हेर्नुस् (भिडियाेसहित) Next Postपाँच पाण्डवकी श्रीमति द्रोपतीको अदभुत कथा, महाभारतमा लुकेको एक रहस्य